Siyaasa Itoophiyaa: Mootummaan Naannoon Tigray xalayaa akeekkachiisaa Mana Maree Federeeshiniitiif deebii kenne | Kichuu
Posted on August 5, 2020 by kichuu_admin
Manni Maree Mootummaa Naannoo Tigraay xalayaa akeekkachiisaa Afa-yaa’ii Mana Maree Federeeshiniitiin irratti barreeffame fudhatama hin qabu ittiin jedhe.
(bbcafaanoromoo)–Mootummaan Naannoo Tigraay adeemsa filannoo gaggeessuuf eegale irraa akka of qusachuu qabu Manni Maree Federeeshinii xalayaa akeekkachiisaa barreessee ture.
Manni Maree Mootummaa Naannoo Tigraay ammoo gamasaatiin xalayaan barreeffame seeraan ala waan ta’eef hin fudhadhu jedheera.
Afa-yaa’iin Maree Federeeshinii aangoo naannoon qabu sarbuun xalayaa akeekkachiisaa barreessuu isaa akka mormu xakayaadhaan deebii kenneera, Manni Maree Naannoo Tigraay.
Akkaataa heera mootummaatiin naannoleen biyyattii kamuu mirga hiree ofii murteeffachuu fi heera mootummaa kabajuu fi kabachiisuu qabu kan jedhu xalayaan naannoo Tigraay kun akeekkachiise Mana Maree Federeeshinii mirga heera mootummaa kana kan srabeedha jedheera.
Mootummaan Naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf murteessuu, seerota filannoo baafachuu fi komishinii adeemsa filannoo mijeessu hundeeffatee hojiitti seenuunsaa akkaataa heera mootummaa keewwata 39tiin kan deggeramuudha jedha ibsi kun.
Akka ibsa mana maree naannoo Tigraay kanaatti Naannoo Tigraay dabalatee naannolee biroonis filannoon nuuf haa dheeratu jedhanii Mana Maree Federeeshinii hin gaafanne.
Kanaafuu manni maree federeeshinii waan hin gaafatamneef deebii kennuu akkasumas raawwachiisuu hin danda’u jedheera ibsi naannoo Tigraay kun.
Naannoon Tigraay mootummaan karaa filannootiin sagalee caalmaa argate aangoo haa qabatu jechuunsaa faallaa heera mootummaa osoo hin taane qajeeltoo heera mootummaa isa ijoodha jedha ibsichi.
Murteen Mootummaa Naannoo Tigraay heera mootummaa naannochaarratti kan bu’uureffateedha kan jedhu ibsi kun, naannochi filannoo gaggeessuuf murteessuun isaa dirqama heera mootummaa ba’uuf malee fedhii aangoof miti jedha.
Xalayaan akeekkachiisaa Afa-yaa’ii Mana Maree Federeeshiniitiin mootummaa Naannoo Tigraayiif barraa’e naannochi heera mootummaarra tarkaanfachuun filannoo gaggeessuuf akka murteesse akeeka.
Deebiin naannoo Tigraay ammoo kun aangoo heera mootummaatiin naannoleef kenname kan sarbuu fi filannoon waggaa shaniin gaggeeffama jedhamee isa heera mootummaa keessatti barreeffame kan sarbuudha kan jedhu.
Akka ibsa naannoo Tigraayitti filannoo gaggeessuun bu’uura heera mootummaa kan qabuu fi filannoo gaggeessuu fi dhiisuu qaamni biraa naannocha ajajuu akka hin qabne, heera mootummaa qofaan akka taliigaman addeessa.
Murteen Mana Maree Federeeshinii kun sirrii miti kan jedhan Ogeessi seeraa Obbo Berhuu Tewolde Berhan, Af-yaa’iin mana marichaallee mirgi xalayaa sana bareessuu seeraan hin kennamneef jedha.
Ogeessi seeraa kan biraa Dr. Adem Kaasee ammoo Manni Maree Federeeshinii, filannoon naannoo Tigiraay kan Heera Mootummaa diigudha yoo jedhe Ministira Muummee ajajuudhaan akka inni mana mareefi kaabinee naannichaa diiguun bulchiinsa yeroo ijaaru gochuu danda’a jedha.
Haata’u malee gaaffiin bu’uuraa, Heerri Mootummaa cabeeramoo hin cabnedha kan jedhu akka ta’e ibsuun, kan Itoophiyaa kan murteessu dhaabbilee federaalaa ta’uun isaa rakkoodha jedha.